Iwaranti - AOOD Technology Limited
Njengomhlinzeki wamasongo kagesi ahamba phambili emhlabeni wonke, i-AOOD inezinhlamvu ezintathu: ubuchwepheshe, ikhwalithi nokweneliseka. Yizizathu nje zokuthi kungani singaba ngumholi. Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe nekhwalithi ephezulu iqinisekisa amandla wokuncintisana we-AOOD, kepha insizakalo ephelele nephelele yenza amakhasimende athembele kithi.
Ukhiye wokuhlinzekwa kwamakhasimende e-AOOD wubuchwephesha, uyashesha futhi uqondile. Ithimba lezinsizakalo ze-AOOD liqeqeshwe kahle, linolwazi olunolwazi olunamakhono nesimo sengqondo esihle senkonzo. Noma iyiphi inkinga ikhasimende elikhulume ngayo, ibizophendulwa kungakapheli amahora angama-24 noma ngabe ngaphambi kokudayiswa noma ngemuva kokuthengiswa.
Isiqinisekiso Sokuqinisekisa Ikhwalithi
Zonke izingxenye ze-AOOD slip ring assemblies amayunithi aqinisekisiwe unyaka owodwa ngaphandle kwemikhiqizo ekhethekile, ekuvumela ukuthi ubuyise noma iyiphi ingxenye enesici ezongena esikhundleni sonyaka owodwa kusukela osukwini lokuthenga kwasekuqaleni ku-invoyisi,
1. Uma kutholakala noma isiphi isici ezintweni zokwakha kanye / noma ekusebenzeni, okuholela ekwehlulekeni kwekhwalithi.
2. Uma iringi yesilayidi ilinyazwe ngephakeji engafanele noma ngokuhamba.
3. Uma iringi eshelelayo ingakwazi ukusebenza ngokujwayelekile ngokusetshenziswa okujwayelekile nokufanele.
QAPHELA: Uma imihlangano yamaslip ring kulindeleke ukuthi isetshenziswe endaweni embi noma ebhubhisayo, sicela wenze izitatimende ezicacile kithi, ngaleyo ndlela singenza imikhiqizo iphathwe ngokukhethekile ukuhlangabezana nokulindela kwakho okuthile.